Uhlolo lwe-ITIL Uqheliso -Siseko se-ITIL-ITS Tech School
Uqwalaselo lwe-ITIL Isiswankathelo - Iisiseko ze-ITIL
Uvavanyo lwe-ITIL ngokubanzi
Yintoni i-ITIL Certification
I-ITIL yeNkonzo yeeNkonzo
IINKONZO ZOKUBALULEKILEYO ITIL: Iinkqubo, Imisebenzi
ITIL Icandelo eliKhulu: ISicwangciso seNkonzo
Inkqubo yeNkonzo yeNkonzo
I-ITIL Icandelo eliKhulu: Uyilo lweNkonzo
ITIL Icandelo eliKhulu: Ushintsho lweenkonzo
I-ITIL Icandelo eliKhulu: Umsebenzi weNkonzo
I-ITIL Icandelo eliPhambili: Ukuphuculwa kweeNkonzo eziqhubekayo (CSI)
I-ITIL Certification ibhekwa njengeemfuno ezingenakuphikiswa ezinokulawulwa kweeNkonzo ze-IT kuba zibonwa ngophawu olulodwa kunye neengcali. Abo bafumana isatifikethi kwi-resume yabo bajongwa njengokwethenjelwa ngakumbi phakathi kwe-interview interview. Nge-ITIL, imibutho ngoku ikulungele ukuhambisa imisebenzi efanelekileyo, emininzi kumthengi wabo.
Isakhiwo sihlengahlengisa iinkonzo zabo kwaye sibeka izikhokelo zengcali nganye ukuba zilandele. Ngaphambi kokuba uqale ukulungela ukuthabatha iimviwo ze-ITIL, iyakwazi ukuqonda iingcamango eziphambili, indlela esebenza ngayo kunye nento encike kuyo kumgca ngamnye ukuba aqiniseke.
I-ITIL ihlala kwiThala leeNkcukacha zeTeknoloji yeeNkcukacha zoLwazi kunye nesakhiwo sinika iinkqubo ezibonakaliswe ngokubanzi njengengxenye ye-IT Management Management, i-ITSM kunye neenkonzo ezahlukeneyo ezinenjongo yokubonelela ngeenkonzo eziphezulu kumakhasimende kunye nabaxumi babo. Isisiseko esibalulekileyo emva kokufumana isatifikethi kukunika imibutho indlela enamandla yokwandisa i-ROI kwaye ihlaziye iinkqubo zezoshishino. Ubungqina obuqinisekisiwe bubonakala njengombambano osebenzayo ukukhokela umbutho ngendlela echanekileyo.
Ukududuzwa kwamagcisa kunye nemibutho ye-IT, i-ITIL ihlukaniswe kwiiklasi ezi-5 eziphawulekayo, ukuba zichazwe
ISebe leNkonzo ye-ITIL
I-ITIL yeNkonzo yoKwakha
Umsebenzi weeNkonzo ze-ITIL
Uphuculo lweenkonzo ze-ITIL oluqhubekayo
Kwinqanaba xa zonke iinkalo ezintlanu zihlanganiswa, ziyifumene nomsebenzi wendlela yokuphila kwaye zikwahlulelana ukuhlelwa kwezigaba ukuya kwiinkqubo ezinkulu kwiinkqubo ezincinci. Inxalenye yenyusa iyakwenza abameli ukuba badlulisele umsebenzi baze bazalise kwiikhosi ezithile.
Iinqununu ezintlanu eziphawulekayo ze-ITIL zongezwa ngokwengeziwe kwiinkqubo ezahlukeneyo kunye nemimandla yenkalo njengoko zifunwa ngumbutho. Bahlukaniswe ngamacandelo okuphatha ahlukeneyo, umzekelo, ulawulo lweso sicelo, ukulawula umda, ukukhutshwa kunye nokulawulwa kweziganeko kunye nokuphathwa kweziganeko phakathi kwamanani amaninzi ahlukeneyo.
Ngamanye amacandelwana enqanaba lesigqeba somgaqo ihlukaniswe kwiinkqubo ezahlukeneyo okanye imisebenzi njengenxalenye yesakhiwo se-ITIL.
Funda kwakhona: I-ITIL yeSiseko seMviwo yokuCwangcisa | Iimvavanyo zee-ITIL ezihlawulelwayo zokuSebenza
Ixesha leSicwangciso seNkonzo libhekiselele kwinkqubo inzululwazi ingayithumela ukuba izalise ngokwaneleyo inkonzo yokuphila. Isicwangciso ngasinye esifanele senziwe sifanele sihambelane noko umthengi adinga kunye neenjongo zabo zokudala.
Isihloko esiyintloko sihlukaniswe ngokwengeziwe kwimimandla eyahlukeneyo.
Inkqubo yoLawulo lwePhothifoliyo yesevisi - Iphothifoliyo yenkonzo ibhekisela kuzo zonke iinkonzo ezinikezelwa yintlangano kwaye ihlukaniswe kwizinto ezintathu eziphawulekayo-iipayipi zenkonzo, iinkcukacha zesevisi kunye nokunikezela inkonzo.
Inkqubo yokuLawula isicelo - Inkqubela phambili ilawula ukuqonda oko kufuneka umthengi kwaye ichaphazele isicelo sokuqhubela phambili izinto okanye iinkonzo. Ukuqonda umthengi kunye nokubongoza ukuba bathenge izinto ezifunyenweyo,
Iiprofayili zabaxhasi - Ukwahlukanisa abathengi kwizigaba ezahlukeneyo kwaye baqonde iimfuno zabo.
Imizekelo Yomsebenzi Wezoshishino - Emva kokuba ilayenti iyalwe ngokupheleleyo, kuyithuba elihle lokuxuba ukuziphatha kwabo kunye nendlela abazuza ngayo iinkonzo ukufaka isicelo.
Inkqubo yoLawulo lwezeMali - Iimali zezemali zithatha inxalenye ebalulekileyo kwaye le mbono ikhutshisa apho inhlangano ifumana ukuhlawula kwayo, yenza isicwangciso semali ngokubhekiselele kwizitolimende ezenziwe ngumthengi kunye nokuhlawula abathengi okanye abathengi ngenxa yeendleko zokusebenza ezibalulekileyo ukunika inkxaso inkonzo.
Igajethi yenkonzo ine-propecycle yayo yokuzikhethela kwaye izakhi zangempela ziyaziwa ngokubanzi njenge-Four Ps of Service design. Bazi,
Abantu - I-HR efunekayo yokwenza inkqubo
Iinkqubo - Iinkqubo zolawulo lweenkonzo eziyimfuneko ekusebenzeni
Izinto - Isiseko sezinto ezintsha kunye nezixhobo ezifunekayo ukuze zigqitywe
Iziphumo - Iinkambiso ezixhasayo, abahlala ngaphandle kufuneka bahlale bexhaswa kwiinkonzo ezingenakukwazi ukuhlangabezana nazo.
Injongo ephambili yokusebenzisa ishintsho kwinkonzo kukuqinisekisa ukuba iinkqubo ezintsha zakhiwa kwaye zithunyelwa kwishishini le-IT, zenziwe ngaphandle kokuchasana nemithetho ebekwe yintlangano.
Yonke into kunye neenkonzo ezidibeneyo zitshintshwe ngendlela umthengi angafumana ngayo iziphumo ezikhangayo. Ukubala ukuba ulawulo olupheleleyo phezu kweenzuzo, ngaba zixhobo okanye iinkqubo, ukuvumela iinkonzo kunye nokusetyenziswa.
Amanqaku amaninzi ahamba phantsi kwesi sigaba kubandakanya,
UkuPhathwa koLawulo (UCwangciso loTshintsho kunye nenkxaso)
UkuLawula nokuPhathwa koLawulo
Ukuvunyelwa kweenkonzo kunye novavanyo
I-Asset yeNkonzo kunye noLawulo loLawulo
Imisebenzi yeNkonzo yenye inxalenye yesaziso se-ITIL kwaye ifaka i-rundown eninzi yeenkqubo ezimele zenziwe ngokwaneleyo ukubonisa ngokucacileyo oko umthengi alindele kwinto.
Ukugijima kumphathi wesiganeko, ukulawulwa kweziganeko zokunyamekela ingozi kunye neengxenye zobuchwepheshe bomsebenzi zikhuselekile phantsi kwenxalenye yokusebenza kwenkonzo.
Injongo yomgaqo wecandelo kukuba kuqinisekiswe ukuba izidingo zabathengi zidibene ngokufanelekileyo, iinkonzo eziphoxekayo zilungiswe ngexesha kunye nokusebenza ngokuqhelekileyo kwenziwe ngokukhawuleza okanye imiba yobugcisa. Umthengisi wenkonzo uphethe uxanduva lokuqinisekisa ukuhanjiswa okufanelekileyo nokusemthethweni kweenkonzo. Amacandelo ahlukeneyo enkonzo yeCandelo le-ITIL ayifaka,
Iingcamango zokuqhuba umbane i-CSI ziyisiseko esisodwa. Umbutho ngamnye kufuneka uzuze kwizinto eziphezulu kunye nokudala kwiimpawu zabo. Ulwazi kunye nolwazi oluvela kwixesha elidlulileyo luya kusetyenziswa ukudala iinkqubo zexesha elizayo ukuze umbutho uthathe.
Ukuphuculwa kweeNkonzo eziqhubekayo kwenza iinkqubo ezintsha, zenze iindlela ezingcono zokunciphisa ukucinga kunye nokukhanya kwendawo yokubamba kunye nokudibanisa abathengi abatsha. Intuthuko eyahlukeneyo kunye neengcamango ezinxulumene neCSI,
Ukuqwalaselwa kweenkqubo zeCSI
Isitifiketi se-ITIL sihlolisiso olunzima kakhulu kubafundi abasandul 'ukuza kubasebenzi abaye basebenza kwiinkampani ze-IT ixesha elide bangayifumana ingcamango engacingi ukuba bayayiqonda. Ezi ziyinxalenye ebalulekileyo kunye namacandelo ahlukeneyo asebenzisana ne-ITIL. I-synopsis ephazamisayo ukukunika oko isatifikethi malunga nayo ngaphambi kokuba ubonise ukuhlolwa ukuphelisa ukuqinisekiswa. Ukugqibelela ngokufanelekileyo kuya kutsho kubaphathi abangcono kunye neempawu zokufumana iimpahla zabo.
I-ITIL yeSiseko seMviwo yokuCwangcisa | Iimvavanyo zee-ITIL ezihlawulelwayo zokuSebenza